စစ်မှုထမ်းပြီးပြီးချင်း Project ကိုယ်စီနှင့် အမြန်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့ကြယ်ပွင့်များ - PX
စစ်မှုထမ်းပြီးပြီးချင်း Project ကိုယ်စီနှင့် အမြန်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့ကြယ်ပွင့်များ
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ ချမှတ်ထားတဲ့စည်းမျဥ်း စည်းကမ်းများအရ အသက်ပြည့်ပြီးသူ နိုင်ငံသား အမျိုးသားတိုင်း စစ်မှုထမ်းဆောင်ကြရပါတယ်။ လူတန်းစားမရွေး ဘာသာမရွေး အမျိုးသားတိုင်း ၂နှစ်အနည်းဆုံးတာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါတယ်။ စည်းကမ်းတင်းကြပ်မှုအပြင် ပင်ပန်းစရာများတာကြောင့် စစ်မှုထမ်းဆောင်ရတော့မယ်ဆိုရင် အိမ်သူအိမ်သားများလည်း စိုးရိမ်ပူပန်ကြပါတယ်။ အဲ့လိုပဲ ပရိတ်သတ်ချစ် အနုပညာရှင်တွေ စစ်မှုထမ်းတဲ့အခါမှာလဲ မိသားစုများနဲ့ထပ်တူ ပရိတ်သတ်များကလည်း အနည်းနဲ့ အများ စိုးရိမ်ပူပန်သောကရောက်ကြပါတယ်။
အခု ဖော်ပြပေးသွားမှာကတော့ စစ်မှုထမ်းပြီးပြီးချင်းကို projectအကြီးကြီးတွေ နဲ့ ပရိတ်သတ်ရှေ့မှောက် ချက်ချင်းဆိုသလို ပြန်ရောက်လာတဲ့ တောင်ကိုးရီးယားအမျိုးသား အနုပညာရှင် ၆ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကတော့-
သရုပ်ဆောင် မင်းသားချောလေး Kang Ha Neulဟာဆိုရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ပရိတ်သတ်တွေ အချစ်ကို အခိုင်အမာရရှိထားသူပါ။ သူကတော့ “When the Camellia Blooms” ဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့အတူ ‘Hwang Yong Shik’ ဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်နေရာကနေ ပရိတ်သတ်တွေဆီကိုပြန်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်ကောင်နဲ့ လိုက်ဖက်လွန်းတဲ့ အပြင် စစ်မှုထမ်းပြီးပြီးချင်း ပထမဦးဆုံးပရိတ်သတ်ရှေ့ ပြန်လာတဲ့ projectလည်းဖြစ်တာကြောင့် လွမ်းနေတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေဆီက တုံ့ပြန်မှုများခဲ့သလို ကြည့်ရှုမှုစံချိန်များကိုလည်း ထပ်တလဲလဲ ချိုးခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတာမကြာသေးဘူးဖြစ်တဲ့ အဲ့ဒီ miniseries dramaဟာဆိုရင်တော့ miniseries တွေထဲမှာ ယခုနှစ်အတွက် အမြင့်ဆုံး နေရာမှာရပ်တည်နေတာဖြစ်ပြီး Kang Ha Neul ကလည်းသူရဲ့ နောက် projectကိုပြင်ဆင်နေပြီလို့သိရပါတယ်။
Super Junior အဖွဲ့ရဲ့ အငယ်ဆုံးလေးဖြစ်တဲ့ KyuHyun ကတော့ မေလ အစောပိုင်းမှာ စစ်မှုထမ်းဆောင်မှု ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ၂၀ရက်နေ့မှာတော့ သူရဲ့ ‘The Day We Meet Again’ လို့ အမည်ရတဲ့ တကိုယ်တော် album ရဲ့ title trackဖြစ်တဲ့ “Aweol-ri” ကိုပရိတ်သတ်တွေဆီ ချပြခဲ့ပါတယ်။ KyuHyun ကို “Salty Tour,” “Kang’s Kitchen 3,” “New Journey to the West” အစရှိတဲ့ အစီစဥ်များရဲ့ castများနဲ့လည်း ပရိတ်သတ်တွေ တွေ့မြင်ခဲ့ရသလို Super Junior အဖွဲ့ရဲ့ comeback track တခုဖြစ်တဲ့ ‘Super Clap’ မှာလည်းပြန်လည်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ သူရဲ့ နောက် projectကတော့ musical ဖြစ်မယ်လို့သိရပါတယ်။
BIGBANG အဖွဲ့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သလို ကိုယ်ပိုင် ပရိတ်သတ်အခိုင်အမာနဲ့ GD ကတော့ အောက်တိုဘာလ စစ်မှုထမ်းပြီးပြီချင်း ၂ပတ်အကြာမှာဘဲ ကမ္ဘာကျော် brandဖြစ်တဲ့ Nike နဲ့ ပူးတွဲလုပ်ဆောင်မှု projectတခုကို ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ အရေအတွက် limited ဖြစ်ပြီး ပရိတ်သတ်တွေကြား တုံ့ပြန်မှုတွေက သိသိသာသာကိုများခဲ့တာကြောင့် ပျမ်းမျှအားဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈,၆၀၀လောက် ပြန်ရောင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ နိုဝင်ဘာလ ၂၃ရက်နေ့မှာတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုဖြန့်ချီသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။
နောက်ထပ် ပရိတ်သတ်အခိုင်အမာနဲ့ မင်းသားချောလေးဖြစ်ပါတယ်။ Ji Chang Wook လို့ပြောလိုက်ရင် k-dramaချစ်သူတိုင်း မသိတဲ့သူမရှိပါဘူးနော်။ သူကတော့ စစ်မှုထမ်းဆောင်ပြီး Melting Me Softly ဇာတ်ကားနဲ့အတူ ပရိတ်သတ်အချစ်တွေကို ဆက်လက်ခံယူခဲ့ပါတယ်။
နောက်ထပ်ရိုက်ဖို့ရှိတဲ့ Charles Darwinရဲ့ အဆိုပြုချက်နဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ projectအသစ်အတွက် ပြောဆိုတိုင်ပင်မှုတွေ စနေပြီ ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။
သရုပ်ဆောင် မင်းသား Kim Soo Hyunကတော့စစ်မှုထမ်းပြီးချိန်မှာ တရားဝင်ကြေငြာထားတဲ့ projectမျိုးမရှိခဲ့ဘဲ ကြည့်ရှုသူများပြီး စံချိန်တွေ တောက်လျှောက်ချိုးခဲ့တဲ့ Hotel De Luna ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ cameo အနေနဲ့ ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးဖြစ်သူ IUနဲ့ DreamHighဇာတ်လမ်းတွဲမှာတုန်းက စတင်သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ခဲ့ပြီး ယခုဇာတ်လမ်းတွဲမှာလည်း မမျှော်လင့်ထားတဲ့ surprise cameoဖြစ်လို့ ပရိတ်သတ်တွေကို ပိုပြီးတောင်စိတ်လှုပ်ရှားစေခဲ့ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတယောက်ကတော့ ငယ်ငယ်က ကလေးသရုပ်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့လည်းပရိတ်သတ်တွေ ရင်းနှီးခဲ့ကြတဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့မင်းသား Lee Hyun Woo ပါ။ သူကတော့ “Hero” ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်မှာသရုပ်ဆောင် Kim Go Eun, Park Jin Joo, Na Moon Hee, Jo Jae Yoon, Bae Jung Nam တို့နဲ့အတူ ပြန်တွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ Music show တခုဖြစ်တဲ့ “Inkigayo” မှာ စီစဥ်တင်ဆက်သူအဖြစ်တွဲဖက်လုပ်နေကြ IUနဲ့လည်း သူမရဲ့ မကြာသေးမှီက “Above The Time” music videoမှာ ပြန်လည်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ ၂၀၁၁ခုနှစ်က IUရဲ့ “You & I” music videoမှာလည်း တွဲဖက်ညီညီသရုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။
သင့်အနေနဲ့ ဘယ်အနုပညာရှင်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှု အသစ်တွေကို ထပ်မျှော်လင့်နေလဲ? သင့်ရဲ့ 2019မှာ စစ်မှုထမ်းပြီးဆုံးမယ့် သဘောအကျဆုံး အနုပညာရှင်ကဘယ်သူဖြစ်မလဲ? Commentမှာ ပြောပြပေးခဲ့လို့ရပါတယ်နော်။ နောက်သတင်းတွေလည်းup to dateဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါ့မယ်။